Book Archives — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ် စာအုပ်
ငါတဆယ်နှစ်အရွယ်မှာနှင့်ငါ့အသက်ကိုအထဲကအတှငျးလှည့်ခံခဲ့သည်. ငါ့နာမကိုနှင့်အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲမ, ငါမူကားအကြောင်းကိုအခြားအရာအားလုံးခဲ့. ငါရှေ့တော်၌တနှစ်တွင်သို့မဟုတ်နှစ်ခုခဲ့ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်. ငါကလူသစ်ကိုအမည်ဝှက်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ကိုကောလိပ်ကျောင်းကိုသွားနှင့် re-ဖန်တီးသောအခါတူမဆိုလိုဘူး; ငါသိသိသာသာတစ်ခုခုငါ့ကိုအတွင်းပိုင်းအပေါ်သွားပြီးဆိုလို. ငါခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း. ငါအသစ်ခံစားခဲ့ရ. ငါအသကျရှငျခံစားခဲ့ရ.
ငါစကားကိုနားထောငျမညျ့သူမည်သူမဆိုဖို့ကကြေညာခဲ့ရသည်နိုင်အောင်ကောင်းသောခံစားခဲ့ရ, အထူးသဖြင့်ငါ၏အအရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု. လူတိုင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ငါ့ကို-အချို့အတွက်အပြောင်းအလဲမှကွဲပြားခြားနားတုန့်ပြန်, ခုခံ-မဟုတ်တဦးတည်းစကားပြောဆိုမှုအမြဲငါ့ထံသို့ထွက်ရပ်နိုင်နှင့်အတူအခြားသူများကို.
ငါကိုအလွန်လေးစားတော်မူသောအသက်ကြီးသောသူနှင့်အတူစကားပြောခဲ့, ငါ၏အလူနေမှုပုံစံစတဲ့နှငျ့ဘုရားသခငျဂုဏျတငျအဘို့အကြှနျုပျ၏ဂိမ်းအစီအစဉ်ကိုရှင်းပြဖို့စိတ်လှုပ်ရှား, အထူးသညျငါ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်. ငါကအကြောင်းအေးဆေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစား, ဒါပေမယ့်၌ငါ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကျင်းပရန်အမြဲခက်ခဲခဲ့ပါတယ်. ထိုစကားရွံရှာဘွယ်သောရောနှောအရှိန်အဟုန်မှာငါ့လျှာမှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, ငါကသူငါဖြစ်သကဲ့သို့အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ခဲ့သောသဘောရတယ်. He was trying to…
အကြှနျုပျ၏အသစ်စာအုပ်, တက်, ဇန်နဝါရီလ 27 ထွက်ကြွလာ! စာအုပ်များရောင်းချနေရာတိုင်းမှာကြောင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်. You can pre-order it now and visit the book website at Risebook.tv. ငါသည်ထာဝရဘုရားတက်ရဖို့ကိုငါ့မျိုးဆက်အားပေးဖို့အသုံးပြုနိုင်သည်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဆုတောင်းပဌနာ. အပေါ်ကနောက်တွဲယာဉ် Watch နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာအုပ်၏အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ဖတ်:
ဒီအစွမ်းထက်စာအုပ်ထဲတွင်, ခရီးစဉ် Lee ကကနှိုးထဖို့အချိန်ရဲ့စောဒကတက်သည်, ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရန်ဖန်တီးခဲ့ကြရာလမ်းကိုအသက်ရှင်ရန်. Young ကသို့မဟုတ်ဟောင်း, ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအသက်ရှင်ရန်ခေါ်ခဲ့ကြရတယ်. မှန်သော…
အဆိုပါစာအုပ်အောက်တိုဘာလထွက်ကြွလာ 1, သင်မူကားမှာနမူနာအခနျးတှငျဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် TheGoodLifeTheBook.com, သင်စာအုပ်-အမိန့် pre နိုင် ဒီမှာ.
အောက်တိုဘာလအပေါ်စာအုပ်ထွက်ရှိ 1, ဒါပေမဲ့အခုသင်က pre-order နိုင် ဒီမှာ.
သငျသညျ၏အဖြစ်အများအပြားသိ, ငါသည်ငါ့နောက်ဆုံးပေါ်အယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူသွားကြဖို့စာအုပ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရတယ်, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ. ကောင်းပြီဒီစာအုပျအောက်တိုဘာလအပေါ် Moody ထုတ်ဝေသူများနှင့်အတူလွှတ်ပါလိမ့်မည် 1, 2012. အောက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌အကြောင်းကိုဆက်ဖတ်ရန်. ထိုအခါမှသွား TheGoodLifeTheBook.com ကဖြန့်ချိသည့်အခါအသိပေးခံရဖို့.
ပွဲဦးထွက်စာအုပ်လွှတ်ပေးရန် Hip-Hop အဆိုတော်ခရီးစဉ်လီ ကောငျးဘဝကို အောကျတိုဘာ ON 1, 2012 Moody ညောမှတဆင့်
လာမည့်စီမံကိန်းကိုလက်ရှိအယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မရှိတော့သည်မုသာ၏အလငျး၌အသက်ရှင်ရန်လူအားစိန်ခေါ်နေဖြင့် "ဒီကောင်းမွန်သောဘဝက" redefines ကားအသစ်နှင့်ပိုပြီးဘုန်းပွင့်ခရီးစတင်.
Los Angeles, ကာလီဖိုးနီးယား. (မေ 17, 2012) Lee ကမိမိအပွဲဦးထွက်စာအုပ်ဖြန့်ချိတက်သည်စိုင်းပြင်သည် -Billboard ဇယား-topping ဟစ်ဟော့အနုပညာရှင်ခရီးစဉ်, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ (Moody ထုတ်ဝေသူများ). ဧပြီလတွင်ထုတ်ပြန်သည်တော်မူသောနောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်မှတစ်ဦးကဆက်လက် 10, 2012 ရော Records ကိုတဆင့်, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ အောက်တိုဘာလအပေါ်တနိုင်ငံလုံးစတိုးဆိုင်များ hit ပါလိမ့်မယ် 1, 2012.
"နှစ်ပေါင်းများစွာ, ငါသည်ခရစ်တော်အားကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးအမြင်များနှင့်ရမှတ်စိန်ခေါ်ကြောင်းဂီတလုပ်နေခဲ့ကြရတယ် – ဒါပေမဲ့အမြဲသီချင်းန့်အသတ်ရှိပါပွီ, သာဤမျှလောက်သင်တစ်ဦးသီချင်းအတွက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ရှိပါတယ်ကွောငျ့,,"ခရီးစဉ်ကပြောပါတယ်. "ဒီ…